Iindaba-Umgaqo wokuSebenza woMatshini oSebenzisa iiRoller oMileyo
Ukusebenza kweMigaqo yoQinisekiso loMatshini oQinisekayo owomileyo
Ibhanti kunye ne-pulley ziqhutywa yimoto, zigqithiselwa kwishafti yokuqhuba ngesinciphisi, kwaye zayangqinelaniswa neshafti eqhutyiweyo kwizixhobo zokwahlulahlula, kwaye zisebenza kumacala ahlukeneyo. Izinto ezahlukeneyo zomgubo owomileyo zongezwa kwi-hopper ephezulu yezixhobo, kwaye ufake ii-roller ezimbini ezilinganayo emva kokuqhekeka kunye nokucinezelwa kwentsimbi. Ezi ziziqengqeleki zijikeleza ngokuhambelana omnye komnye kwaye izinto ziyanyanzeliswa ukuba zondliwe phakathi kwimiqulu emibini. Imiqolo iluma izixhobo kwisithuba sokuqengqeleka koxinzelelo lokunyanzelwa. Emva kokuba umbandela udlula kwindawo yoxinzelelo, uxinzelelo lomhlaba kunye nomxhuzulane wezinto ezizizo zivelisa ngokwendalo.
Emva kwesondo, ii-agglomerate ezimile njengemicu ziyaphuma kwaye zityunyuzwe ngumqolo ojikelezayo, kwaye izinto ezityumkileyo zingene kwisisefo ukuze zifumane isuntswana ngalinye. Okanye faka isikrini esijikelezayo sokujikeleza ukuze uphinde uvavanye.
Emva kokubumba i-roller extrusion kunye nebhola, kwaye ugqitha kwisibini semixokelelwane, ithunyelwa kwigumbi lokusebenza lokutyunyuzwa, apho amasuntswana emveliso agqityiweyo (iibhola) ayahluzwa aze ahlukaniswe, emva koko izinto ezibuyisiweyo zixutywe nezinto ezintsha, Kwaye emva koko yandiswa. Ngokujikeleza okuqhubekayo kweemoto kunye nokungena okuqhubekayo kwezinto, ukuveliswa kwemveliso kungafezekiswa. Iimveliso ezifanelekileyo ziya kuthunyelwa kwindawo yokugcina izinto ezigqityiweyo kusetyenziswa indlela yokuhambisa.
Izinto ezingumgubo ongaphantsi kwescreen zibuyiselwa kumgqomo wezinto ekrwada zokuqengqeleka kwesekondari ngokuhambisa. Ngokutshintsha ifom ye-grooving yomphezulu we-roller, izinto ezinje ngeeflakes, imitya, kunye ne-oblate spheroids zinokufunyanwa.